सभामुख महरालाई लागेको आरोप पुष्टि भए के हुन्छ ? मुलुकी संहितामा यस्तो छ ब्यवस्था ! – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ आश्विन १४ गते मंगलवार ११:०४ मा प्रकाशित
ताण्डव न्यूज । अहिले संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथी गम्भीर आरोप लागेको छ । घटनाले अब कस्तो रुप लिन्छ भन्ने चासो पनि बढिरहेको छ । अब महरामाथी लागेको आरोपले कस्तो रुप लिन्छ त्यो समयले बताउला । तर, उक्त आरोपमाथी छानविन भएर महरा माथीको आरोप प्रमाणीत भए महरामाथी के कारबाही हुन्छ त ? यस मुद्धामा संविधानको भाग ८ धारा ९१ आकर्षीत हुनेछ । महरामाथि लागेको बलात्कारको आरोप मुलुकी फौजदारी संहितासमेत आर्कषित हुने देखिन्छ। धारा ९१ को ६ अनुसार उक्त आरोप लागेपछि पद नै रित्त गर्नुपर्ने पनि ब्यवस्था छ ।
के छ संविधानको धारा ९१ को उपधारामा
धारा ९१ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखले गर्ने र त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउने उल्लेख छ।
मुलुकी संहितामा यस्तो छ ब्यवस्था
मुलुकी फौजदारी संहिता २१९(३) को ङ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ। उक्त व्यवस्थामा सात वर्षदेखि १० सम्मको सजाय हुने उल्लेख छ। महरा सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेको र उनकै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले आरोप लगाएकाले संहिताको दफा २२२ को २ पनि थप आर्कषित हुनेछ। उक्त व्यवस्थामा आफ्नो सुरक्षा र संरक्षणमा रहेको व्यक्ति भएमा थप ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ। यसरी हेर्दा महरा दोषी ठहर भएमा १३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने देखिन्छ।